Posted: March 21, 2010 in article आहा	4
Dilip Acharya says:	March 22, 2010 at 11:30 am	यो फरक प्रकारको प्रस्तुती रोचक लाग्यो मलाई । ओझेलमा परेको समाजकै एक कुना र कोणको तितो यथार्थको कथा जानकारीमुलक नै रह्‍यो ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) says:	March 23, 2010 at 1:42 am	दिलिप जी ले भन्नु भएको जस्तो – अलिक फरक प्रसंग तर ओझेल परेका कुराहरु उत्खनन गर्नु भएको रहेछ … राम्रो लागो ! तर त्यो तितो यथार्थ कुरा ले अलिक मन नमिठो भो !
Dhruba Panthi says:	March 24, 2010 at 7:37 pm	जीवन बुझ्ने तपाईंको प्रयास र ती जोशिला वृद्धाका कुरा पढ्दा रमाइलो लाग्यो। हामी जिन्दगी गुनासोमै बिताइदिन्छौँ तर बाँच्ने काइदा यो पनि त छ।
Ashesh says:	March 25, 2010 at 11:23 am	तपाईँले जीन्दगीको अर्को पाटोलाई कोट्याईदिनुभयो, मन भाँडिने गरि । जीवनको उतरार्दमा पनि देशप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने आँट अनि जीवनभोगाईको सच्चा चित्रणले मनलाई छोयो । कताकता आफैदेखि लाज पनि लाग्यो ।
GRE का प्रखर प्रवक्ता, आजको सन्दर्भमा	विवाद र चर्चाको बिच घेरिएको गिरिजा प्रसाद कोइरालाको संक्षिप्त जिवनी	Meta	Register	Log in